दशैँअघि सवारी अनुमति नपाइने, नयाँ आवेदन असोज १२देखि
असोज ६, २०७८
सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) लिन बाँकी रहेकाले दशैँपछि मात्र पाउने भएका छन् ।
प्रिन्ट कार्ड अभाव भएपछि स्मार्ट लाइसेन्स दशैँअघि वितरण गर्न नसकिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । शान्ति सेना, वैदेशिक रोजगार तथा वैदेशिक अध्ययनमा जाने खालका अति आवश्यक व्यक्तिको लाइसेन्स भने वितरण गर्ने गरिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले भने, “प्रिन्ट कार्ड आउन कम्तीमा एक महिना लाग्छ, आज डेलिभरी अडरको पत्र दिँदै छौँ, दशैँअघि प्रिन्ट गर्न गाह्रो छ, दशैँपछि यसको स्पिड बढाउनु पर्छ ।”
हाल विभागमा सात लाखप्रति लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी छन् । नवीकरण गर्न दिएका र नयाँ लाइसेन्स कुरिरहेका सेवाग्राहीले राजस्व बुझाइसकेपछि सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
फ्रान्सबाट १४ लाखप्रति कार्ड ल्याउन सम्झौता भएको छ तर कार्ड ल्याउन नसक्दा प्रिन्टको काम रोकिएको छ । २०७२ सालमा स्मार्ट लाइसेन्स लागू भएपछि विभागले काम गर्न नसकेको हो । विभागले १४ लाख विद्युतीय लाइसेन्सका लागि २०७७ असार २९ गते एक महिनाको म्याद दिएर ग्लोबल टेन्डर गरेको थियो तर चौध महिना हुँदा पनि कार्ड ल्याएको छैन । २०७७ मै प्रिन्ट कार्ड सकिएको भनेर टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
विभागका अनुसार तत्कालीन अवस्थामै दैनिक आठ हजारप्रति लाइसेन्सको माग हुँदा विभागले दैनिक दुई हजार ५०० प्रति मात्र प्रिन्ट गर्न सक्थ्यो । जसका कारण परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीले दुई वर्षसम्म लाइसेन्स कुर्नुपर्ने बाध्यता भयो ।
विभागले असोज १२ गतेबाट लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन खुला गर्ने भएको छ । गत वैशाख १६ गतेदेखि बन्द भएको नयाँ लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा सुचारु भएको छ । असोज १२ गतेपछि अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिने छ । गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मण दर्नालले खबर लेखेका छन् ।
बाढीपहिरोमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ७७ पुग्यो
किसानको १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ क्षति
वर्षाले डुबायो धान, बीउ जोगाउनै समस्या
यो वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउने
संविधान सफल कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन प्रणालीमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखियो– विष्णु पौडेल [अन्तर्वार्ता]
असोज ३, २०७८
संसद् विघटन र पार्टी विभाजनबारे समीक्षा गर्न परिस्थिति परिपक्व भइसकेको छैन– अरुण नेपाल [अन्तर्वार्ता]
असोज २१, २०७८
प्रतिनिधि सभा विघटन रोक्न मैले सबै प्रयास गरेको थिएँ : सुवास नेम्वाङ [अन्तर्वार्ता]
त्यो दशैं, अनि यो दशैं !
असोज २९, २०७८
यसरी मनाउने दशैं
असोज २८, २०७८
राजनीतिमा लागेका युवालाई सुझाव– नेता बन्नुहोस्, अनुयायी होइन
हवाई सुरक्षाको चिन्ता : विमानको नियमित मर्मतलाई बाध्यकारी र नियमनलाई कडा बनाऊ
असोज १२, २०७८
मुठभेड होइन, संसद् चलाउन संवाद गर
भदौ २७, २०७८
खेतमै धान डुब्दा देशभरका चुलोमा असर: चामल आयातको ग्राफ ६५ अर्ब नाघ्ने !
बागमती प्रदेशमा पाण्डे र बानियाँ आधा–आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति
कांग्रेसमा लहर आएको छ : वरिष्ठ नेता पौडेल
थप ५४५ जनामा कोरोना पुष्टि, ८ संक्रमितको मृत्यु
सर्लाहीको बयलवासमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार
शेयर बजारमा १४.७० अंकको गिरावट, कारोबार रकम पनि घट्यो
स्रोत नखुलेको ८० लाख रुपैयाँसहित १ जना पक्राउ
सीके राउतको प्रस्टोक्ति : अख्तियारले भ्रष्टाचारी संरक्षण गर्ने, जनताले जनकारबाही !
एमालेको स्थायी कमिटी बैठक शुरू, पाँच एजेण्डामा छलफल